नाममात्रैका ‘कोरोना’ अस्पताल – Health Post Nepal
नाममात्रैका ‘कोरोना’ अस्पताल
२०७७ वैशाख २२ गते ९:५६
काठमाडौं छिरेकाहरू टेकु अस्पतालमा लाम
गएको माघ ९ गते नेपालमा पहिलो कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएसँगै तीन महिनामा ७५ जना संक्रमित भइसकेका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि उपत्यका, हब अस्पताल, प्रदेश र जिल्ला गरी १ सयभन्दा बढी अस्पताललाई पाँच तहमा विभाजन गरी सेवा तोकेको छ।
हालसम्म १६ जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्।
संक्रमण बढ्दै जाँदा केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको समन्वयमा छुट्टै ‘कोभिड–१९’ अस्पताल निमार्ण भएका छन्। तर, संक्रमितलाई उपचार गर्न जनशक्ति तथा उपकरण अभावमा अझै उपचार गर्ने क्षमता नभएको देखिन्छ। कोरोना उपचार विशेष भनेर खुलेका केही अस्पतलबारे गरिएको एक रिपोर्ट :
सरकारले कोरोना संक्रमितको फ्रन्टलाइनमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल राखेको छ। संक्रमण सुरु भएपछि अस्पतालमा रहेका बिरामीलाई अन्य अस्पताल रिफर गरेर कोभिड उपचारमा मात्र केन्द्रित भएको छ।
हालसम्म तीन संक्रमित र १ सयभन्दा बढी कोरोना आंशका गरिएकालाई उपचार दिई घर फर्काइसकेको छ। अहिले अस्पतालमा संक्रमित बिरामी छैननु।
देशमा बढ्दो संक्रमण मध्यनजर गरी ६ भेन्टिलेटरसहित २० आइसियु बेड र २५ आइसोलेसन बेड थप गरेको छ। यसअघि पाँच आइसोलेसन कक्ष र तीन आइसियु कक्षमार्फत् सेवा दिएको थियो।
संक्रमित संख्या कम भएको अवस्थामा अस्पतालमा जनशक्ति पर्याप्त रहेको अस्पतालका निर्देशक डा. सागरराज भण्डारी बताउँछन्।
‘हालसम्म आइसियुमा भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने गम्भीर बिरामी आएका छैनन्,’ डा. भण्डारीले भने, ‘सयौंको संख्यामा बिरामी आएको अवस्थामा जनशक्ति र पूर्वाधारले धान्न सक्ने अवस्था छैन।’
संक्रमण बढेको अवस्थामा केही मेडिकल अफिसर र नर्स नियुक्त गर्न आवदेश माग्ने तयारीमा लागेको उनले बताए। एनेस्थेसिया र क्रिटिकल केयर चिकित्सक अभाव भएका कारण मन्त्रालयलसँग माग गरेको डा. भण्डारीले बताए।
प्रदेश १ को कोशी ‘कोभिड’ अस्पतालमा हालसम्म ३१ जना संक्रमित बिरामीको उपचार भइरहेको छ। कोरोना प्रकोप बढ्दै गएसँगै प्रदेश सरकार तथा कोशी अस्पतालको समवन्यमा कोभिड अस्पताल निमार्ण भएको थियो।
संक्रमित संख्या बढ्दै जाँदा जनशक्ति अभाव हुँदै गएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.संगीता मिश्र बताउँछिन्।
कोशी अस्पतालको जनशक्तिले नै यतिबेला कोभिड अस्पतालमा सेवा दिइरहेको छ। ‘दुईतिर काम गर्दा जनशक्ति अभाव भएको छ,’ डा. मिश्रले भनिन्, ‘स्वास्थ्यकर्मीले दिन–रात नभनी सेवा दिइरहेका छन्।’
कोशी अस्पतालको सेवा सुचारु गर्न एक सिफ्टमा २५ स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड अस्पताल खटाएको उनले जानकारी दिइन्।
कोभिड अस्पतालमा हाल पाँच भेन्टिलेटर तथा १० आइसियु बेड छन्।
‘कोभिडका बिरामी दिनहुँ बढिरहेका छन्,’ डा. मिश्रले भनिन्, ‘तर, अझै उपकरण थप्न सकिएको छैन।’
हाल ५० बेड भए पनि २० बेड थप गर्न सकिने अस्पतालले जनाएको छ। केन्द्र सरकारसँग जनशक्ति माग गरे पनि हालसम्म नपठाएको मिश्रको गुनासो छ।
गत चैत ९ बाट प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा ५० बेडको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। आठ आइसियुसहित चार भेन्टिलेटर जडान गरिएका छन्। ४५ आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा रहेको अस्पतालकी मेट्रोन ज्योती पौडेलले जानकारी दिइन्।
अस्पतालले हालसम्म ४१ जनालाई कोरोना आशंकामा परीक्षण गरेको छ। बुटवलमा एकजनालाई काेराेना संक्रमण पुष्टि भएकाे ५।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको पनि सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएका कारण कोभिड अस्पतालका लागि छुट्टै करार जनशक्ति पुरिपूर्ति गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ।
आइसोलेसन कक्षका लागि नर्स र पारामेडिक्स गरी १२ स्वास्थ्यकर्मी छन् भने आइसियुमा १० नर्स र पाँच मेडिकल अफिसर तयारी अवस्थामा रहेको पौडेलले बताइन्।
‘कोरोना आशंका गरेर बिरामी नभएका कारण जनशक्ति पुगिरहेको छ,’ पौडेलले भनिन्, ‘आशंका गरेका बिरामीलाई पनि हेर्नुपर्ने भएका कारण पिपिईको केही समस्या देखिएको छ।’
संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले मनोबल बढाउने काम गर्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ।
पहिला आयुर्वेदिक सेवा दिइरहेको आयुर्वेद शिक्षण अस्पताल दाङले यतिबेला कोरोना संक्रमण आशंका रहेकाको उपचार गर्दै आएको छ। कोभिड–१९ संक्रमित बिरामी उपचारका लागि दाङको आयुर्वेद शिक्षण अस्पताल बेलझुन्डीमा चैत १२ बाट सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा आएको हो।
थोरै समयमा पूर्वाधार नभएको अवस्थामा १ सय बेडको सुविधासम्पन्न अस्पताल निमार्ण भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. सर्वेश शर्माले जानकारी दिए।
कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालनमा आउनुअघि यस भवन आयुर्वेदिक अस्पतालका रूपमा सञ्चालनमा थियो।
हालसम्म ७५ जनाको नमुना परीक्षण भएकोमा ६५ को रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि क्वारेन्टाइन तथा घरमा फर्काइएको अस्पतालले जनाएको छ।
अस्पतालमा हाल सातजना भर्ना भएर सेवा लिइरहेका छन्।
नुमना परीक्षणमा उनीहरूलाई कोरोना पुष्टि नभएका कारण क्वारेन्टाइन तथा घरमै आइसोलेसनमा बसेका छन्।
राप्ती प्रादेशिक अस्पतालअन्तर्गत् रहने गरी सञ्चालनमा ल्याइएको यो अस्पतालमा हाल चिकित्सक, नर्स र कर्मचारी गरी ४५ जना खटिएको डा. शर्माले जानकारी दिए।
कोरोना विशेष अस्पतालमा अहिले तीन भेन्टिलेटर र पाँच आइसियु बेड व्यवस्था गरिएको छ।
अस्पतालमा स्वाब परीक्षण गर्ने मेसिन नभएका कारण भेरी अस्पताल पठाउने गरिएको छ। कोभिड अस्पताललाई लेभल २ का रूपमा राखिएको छ।
‘कोरोना आशंका गरिएका बिरामीलाई स्वाब लिई परीक्षणका लागि भेरी अस्पताल पठाउने गरेका छौं,’ डा. शर्माले भने, ‘पोजेटिभ देखिएको अवस्थामा अन्य अस्पताल रिफर गर्ने भनिएको छ।’
सरकारले लेभल २ मा राखेका अस्पतालमा कोरोना आशंकाका बिरामी राख्ने र पोजेटिभ देखिएको अवस्थामा अन्य अस्पताल रिफर गनुपर्ने हुन्छ।
‘फिजिसियन र मेडिकल डाक्टर माग गरेका थियौं, तर हालसम्म पनि कसैको आवेदन परेको छैन,’ डा. शर्माले भने।
भरतपुर कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक आवश्यक सुरक्षा सामग्री पाउन छाडेपछि राजिनामा दिँदै हिँड्न थालेका छन्। चैत ७ देखि औपचारिक रूपमा स्थापना भएको कोरोना अस्पतालमा अहिलेसम्म तीन चिकित्सकले राजिनामा दिएका छन्।
कोरोना अस्पतालमा चार मेडिकल अफिसर भर्ना गरिएको थियो। तीमध्ये अहिलेसम्म एकजना मेडिकल अफिसरले एउटा पिपिईभन्दा बढी प्रयोग गर्न नपाएपछि राजिनामा दिएको डा. शुलभ सुवेदीले जानकारी दिए।
‘अस्पताल स्थापनादेखि वैशाख ११ सम्म मेडिकल अफिसरका रूपमा काम गरेँ। अहिलेसम्म पाँचवटा मास्कमात्र दिएका थिए। त्यो पनि व्यवस्थापनलाई रिझाउनुपर्ने,’ डा. सुवेदीले भने, ‘मास्क पनि नपाएपछि राजिनामा दिएर निस्केको हुँ ।’
कोरोनाको त्रास बढेको अवस्थामा ज्यानको बाजी राखेर उपचारमा खटिँदा पनि अपमानित हुनुपरेको उनले दुःखेसो पोखे।
कोरोना आशंकामा अस्पतालमा दैनिक १५ देखि २० जनाहाराहारी भर्ना हुने गरेका छन्। यहाँ चार सिफ्टमा काम हुँदै आएको छ। एक सिफ्टमा एक मेडिकल अफिसर खटाइने गरिएको छ। यसबारे अस्थायी अस्पतालका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारीसँग बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन।
भरतपुर अस्पतालको जनशक्तिले अस्थायी अस्पतालमा सेवा दिइरहेको छ। हाल १० जनाले सेवा दिइरहेको सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलले जानकारी दिए। कोरोना आशंका गरिएका १० जना आइसोलेसनमा छन्।
अस्थायी निर्माण गरिएको अस्पतालमा ७० बेड क्षमता छ। तर, हाल २५ बेडमात्र सञ्चालनमा छ।
उता, भरतपुर अस्पतालमा एक संक्रमितको उपचार भइरहेको छ । एकजना निको भएर घर फर्किसकेको अस्पतालका डा. कृष्ण पौडेलले बताए। आइसियु बेड ३० र भेन्टिलेटर ६ वटा रहेको उनले बताए।
धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोरोना भाइरस उपचारका लागि १ सय बेडको छुट्टै ‘कोभिड–१९’ अस्पताल सञ्चालनमा छ।
कोरोना उपचार तथा रोकथाम गर्न १३ आइसियुसहित भेन्टिलेटर सुविधा रहेको अस्पतालका प्रवक्ता डा. अशोक ऐरले जानकारी दिए।
उनका अनुसार अस्पतालमा १३ आइसियुसहित भेन्टिलेटर, छुट्टै एक्सरे र अल्ट्रासाउन्ड सुविधासहित १ सय बेडको कोभिड–१९ अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
सरकारले बिपीलाई लेभल ३ मा राखेको छ। जसअन्तर्गत् बहुविज्ञ सेवा उपलब्ध हुनेछ। कोभिड अस्पतालमा भने शल्यक्रिया सेवासहित बहुविज्ञ सेवा प्राप्त हुनेछ।
प्रदेश १ मा कोरोना संक्रमण दर सबैभन्दा बढी छ। त्यहाँ हालसम्म ३१ जना कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएका छन्।